(Union of Myanmar Travel Association)
Union of Myanmar Travels Assocation, since 2013.Member No. 2121
(Myanmar Tourism Marketing)
Myanmar Tourism Marketing, since 2014.Member No. 066/16
Pacific area travel Association.Member No.
Supported by the International Trade Centre (ITC) within the framework of the Myanmar export coaching programme ("Myanmar Inclusive Tourism focussing on Kayah state" project funded by the Netherlands).
K&H Travels' Services
ပြည်ပသို့ ခရီးသွားလိုသူများအတွက် အဖွဲ့လိုက်ခရီးစဉ်များကို တစ်လတစ်ခါပုံမှန် စီစဉ်ထားသကဲ့သို့၊ မိသားစုသီးသန့်သွားလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းများသီးသန့်သွားလိုလျှင်ဖြစ်စေ ထပ်မံစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပေးရသော ဈေးနှုန်းနှင့် တန်သောဝန်ဆောင်မှုကို အာမခံပါသည်။
We plan inbound tours, outbound tours, ticketing as well as MICE packages. For MICE we focus on Incentive & Corporate with team building activies and Educational Travel as well. For details on MICE, pls visit www.kh-micetravels.com.
K&H Travels’ မှ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ၊ မြန်မာများအတွက် ပြည်ပခရီးစဉ်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ် ရောင်းဝယ်ပေးခြင်း အပြင် MICE (Meeting, Incentive, Corporate, Exhibition) ခရီးသွားထဲတွင် ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီများအတွက် အဖွဲ့လိုက်ခရီးစဉ်များ၊ ပြည်ပပြပွဲ ခရီးစဉ်များလဲ စီစဉ်ပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့လိုက် သွားနိုင်သောနေရာများနှင့် အခြားသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.kh-micetravels.com သို့သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
K&H Travels’ မှ အဖွဲ့လိုက်သွားသော ခရီးစဉ်များအား တစ်လလျှင် ပုံမှန် ၃ နိုင်ငံ နှင့် ၄ နိုင်ငံ ခန့်ထွက်ခွာပါသည်။ တစ်ဖွဲ့လျှင် အနည်းဆုံး ၁၀ ယောက်မှ အများ အယောက် ၂၀ အထိပါ ပါသည်။ လစဉ်ထွက်ခွာသော နိုင်ငံများ နှင့် ခရီးစဉ်များအား သိလိုပါက .....
ထွက်ခွာသော နိုင်ငံများ >>>
မိသားစု သီးသန့် သွားချင်သူများ၊ ထူးထူးခြားခြား ခရီးစဉ် စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သီးသန့် ခရီးစဉ်များ၊ ဥပမာ ဘာလီတွင် နေထွက်ချိန် ကြည့်ရန် Trekking သွားချင်သူများနှင့် ရေတံခွန် ခရီးစဉ်များအပြင်၊ အခြားနိုင်ငံ များ၏ ထူးခြားသောနေရာများသို့လည်း သီးသန့် ခရီးစဉ်များရှိပါသည်။
သီးသန့် ခရီးစဉ်များ >>>
Fare & Easy
ခရီးသွားနေကျသူများ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နှင့် အေးအေးဆေးဆေး သွားချင်သူများ အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ဟိုတယ် နှင့် ဝင်ကြေးများ ကြိုင်တင်ဝယ်ယူနိုင်ရန်
09:15 AM To 17:00 PM
အမှတ်(၁၃၂) B ၊ ဒုတိယထပ်၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ Phone: 01-510 057, 01-510 338, 09-972 719 962~63 Email: [email protected], [email protected]
Holiday Tour Contact us
Still Can't find your dream holiday itinerary? Let us know and we will get back to you shortly.
သင့်စိတ်ကြိုက် ပြည်ပခရီးစဉ် ရှာတွေ့ပါရဲ့လား? သင်သွားချင်တဲ့ အချိန်နှင့်မကိုက် ဖြစ်နေပါသလား?
K&H Travels’ အား အောက်ပါ ကွက်လပ်လေးဖြည့်ပြီးဆက်သွယ်လိုက်ပါ၊